Carolyn Hyman - Aloha United Way 2-1-1
By Carolyn Hyman	/ Maarso 7, 2022	/ 0 Faallo
Khadka caawinta ee AUW 211 waxa lagu heli karaa taleefoon, qoraal, iimaylka ama raadinta onlaynka ah. Markii "Lani" ay fariin u dirtay inay u baahan tahay caawimo ninkeeda, aad ayay ugu faraxday inay si fudud u hesho taageerada. "Ma garaneynin meel aan caawimaad ka raadsado sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helo hagida. Warbixintu waxa ay si toos ah ii tilmaamtay...
By Carolyn Hyman	/ Febraayo 28, 2022	/ 0 Faallo
Markii ay "Lois" wacday Khadka Caawinta AUW's 211, ma aysan hubin inay heli doonto wax gargaar ah. "Waxaan u maleynayay in marka kaliya ee aan wici karno ay tahay cunto ama hoy, laakiin waxaan arkay boodh waxaanan mooday inaan isku dayi doono." Tani waa jawaab guud, laakiin in ka badan 4,000 oo agab ah oo laga heli karo AUW 211…
By Carolyn Hyman	/ Febraayo 21, 2022	/ 0 Faallo
Katerina, oo ah 61 jir degan Waikiki ayaa wacday khadka caawinta ee AUW's 211 iyadoo argagaxsan. "Waxaan helay warqad aan u baahnaa si aan u cusboonaysiiyo macluumaadka SNAP-kayga haddii kale dheefaha ayaa joogsan doona. Waxaan saaxiibkay ka codsaday inuu iga caawiyo kombiyuutarka sababtoo ah ma aqaan sida loo sameeyo alaabtaas." SNAP, haddii kale loo yaqaan Nafaqada Dheeraadka ah…
Sida Baaskiilka oo kale
By Carolyn Hyman	/ Febraayo 15, 2022	/ 0 Faallo
"Ma garanayo sida loo kaxeeyo baaskiilka. Waan ka xishoonayaa inaan qirto, laakiin waa run,” ayuu yidhi 211 qof oo dhowaan booqday website-ka isagoo qoslaya. Amy waxay sii waday inay sharaxdo in gabadheeda ay leedahay shaqo baaskiil oo soo socota, iyo carruurta aan garanayn sida loo kaxeeyo waxaa loo diri doonaa inay ku celceliyaan "goobo"